Yaa ka mas`uul ah caafimaadkeena?
Waagii hore waa lagu fikiri jiray in hayadaha caafimaadku mas`uul ka yihiin caafimaadka bukaanka.
Laakiin sanadahan dambe waxaa caadi noqotey in qofku ka fikiro inuu mas`uul ka yahay caamifaadkiisa. Qaabka qofku u nool yahay wax weyn ayey ku leedahay caafimaadkiisa. Hayadaha caafimaadku waxay mas`uul ka yihiin inay dadweynaha siyaan talooyin iyo hanuunin, laakiin adiga ayaa ka mas`uul ah in aad qaadataa talooyinka. Way sahlan tahay inaad heshid warbixin ku saabsan ka hortaga cudurada iyo hababka kale gedisan ee loo daaweyn karo cudurada. Sidoo kale waxaad warbixin ka heli kartaa internettka, waxaa kale oo jira waraaqo warbixin oo aad ka heli kartid xafiiska dhaqtarka iyo farmashiyaasha.
Waxaa jira olole farabadan iyo koorasyo ka hadlayo caafimaadka. Caafimaadku waa maado muhiim ah oo looga hadlo iskuulada, sidoo kale dawladdu waxay mar marka qaarkood wadaa olole warbixin caafimaad oo kale gedisan. Taleefishinka iyo raadiyaha waxaad ka helaysaa warbixino badan oo ku saabsan caafimaadka.
Inkastoo daryeelka dawladdu mas`uul ka yahay in dadweynuhu helaan daryeel caafimaad, laakiin inta badan qofku isaga ayaa mas`uul ka ah noloshiisa iyo habka uu noolaanayo iyo inuu ku dadaalo caafimaadkiisa.
Wadamo badan bukaansocodku waxay yaqaaniin in dhakhaatiirtu awood badan leeyihiin oo ay g`oaamiyaan daaweynta bukaansocodka. Bukaansocodkuna waxay barteen inay markasta dhakhtarka ka tagid daawo la`aan. Norway waxaa caadi ah in bukaansocodka iyo dhakhtarka ka wada hadlaan noocyo kale gedisan oo daaweyn ah iyo la socodka daaweynta.
Caafimaad wanaagsan- maha oo kaliya qof aan jiranayn?
Dadka qaarkii waxay qabaan caafimaad wanaagsan waa qof aan jiraneyn. Kuwa kale waxay u arkaan caafimaad wanaagsan inuu yahay in qofku nolol wanaagsan ku nool yahay, noloshiisana uu ku qanacsan yahay.
Ujeedada ugu weyn ee daryeelka bulshadu waa in dadweynuhu helaan nolol wanaagsan. Waxaana ka mid ah inay helaan daryeel caafimaad oo wanaagsan.
Daryeelka dawladdu wuxuu mas`uul ka yahay in dadweynuhu heli karaan daryeel caafimaad iyo in dhaamaan ay helaan daaweynta ay u baahdaan, iyada oo aan loo eegeyn dhaqaalaha qofka. Waxaa jira kaalmooyin dhaqaale oo kale gedisan oo sahlayo arintan.
Dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya hayadaha caafimaadka oo dhan waa sir qariyeyaal. Taa micneheedo wuxuu yahay inay wax xog ogaal ah oo ku saabsan bukaansocodka aysan ogaaneyn qof kale ilaa uu bukaaansocodku ogolaansho bixiye mooyee.